Zimbabwean public sector workers will hold a demonstration on Monday calling on the government to pay bonuses for 2016, the civil service union said, setting them on a collision course with President Robert Mugabe's cash strapped administration.
« UNESCO calls for robust investment in education in Namibia
Xenophobia tension remains high in Johannesburg »
Robert Mugabe of Zimbabwe endorses Trump’s “America for Americans”
28/02/2017 Be the first to comment! Judge orders protesting Zimbabwean pastor freed on bail
28/02/2017 Be the first to comment! Court in Zimbabwe throws out case against Mugabe
28/02/2017 Be the first to comment! Zimbabwe VP Mnangagwa dismisses rumours of wanting to take over power
28/02/2017 Be the first to comment! Typhoid fever claim 9 lives in Zimbabwe